IMorning Live yakwaSABC iyalelwe ukuba ixolise ephephandabeni | News24
IMorning Live yakwaSABC iyalelwe ukuba ixolise ephephandabeni
Cape Town – Uhlelo lwasekuseni olugxile ezindabeni kanye nezingxoxo oludlala kuSABC 2, iMorning Live, seluyalelwe ukuthi luxolise ephephandabeni iDaily Sun ngemuva kokusakaza ingxoxo encike ohlangothini olulodwa nalapho iSABC ingazange izihluphe ngokubandakanya leli phephandaba elathola okukhulu ukugxekwa ohlelweni.
Leli phephandaba elingaphansi kwesitebele seNaspers labe selifaka isimangalo kwiBroadcasting Complaints Commission of South Africa (BCCSA) limangalela iSABC ngemuva kokuthi umethuli wohlelo, uLeanne Manas, enza ingxoxo “ngezindaba ezingombombayi” nalapho kwagxekwa khona leli phephandaba.
OLUNYE UDABA: Izinguquko zoKhozi FM: uZama Ngcobo noS'gqemeza bazohlukaniswa
ULeanne Manas waxoxisana nomsakazi weMetro FM, okuyisiteshi seSABC, uWilson B. Nkosi ngoNovemba kunyaka ka-2016. Iphephandanda iDaily Sun lalikade lishicicele udaba olukhuluma ngaye uNkosi.
Kule ngxoxo, uWilson B. Nkosi wathi udaba olwashicilelwa yiDaily Sun “kwakuwudaba olwakhiwe, kusuka phezulu kuya phansi”, wathi “iDaily Sun kumele ivezwe obala” kanye nokuthi “amaphephandaba amaningi ayaphunyuka kulokhu ngoba ayazi ukuthi iningi labantu abazikhoni izindleko zabameli”.
I-BCCSA iyalele uSABC ukuthi uxolise ohlelweni iMorning Live.
“IMorning Live ithanda ukuxolisa kuDaily Sun. Lokhu kulandela ukuthi leli phephandaba laphathwa ngendlela engenabo ubulungiswa kulolu hlelo ngomhlaka-22 kuNovemba 2016 mayelana nodaba iDaily Sun eyalibhala ngoWilson B Nkosi.”
“I-SABC iyavuma ukuthi iDaily Sun ayinikwanga ilungelo lokuphendula. Ngokuncikene nokuphawula ohlelweni, iSABC iyaxolisa kuDaily Sun.